Banaanabax looga soo horjeedo heshiiska masuuliyiinta DKMGS ee Kambala oo ka socda Galgaduud • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Banaanabax looga soo horjeedo heshiiska masuuliyiinta DKMGS ee Kambala oo ka socda Galgaduud
Banaanabax looga soo horjeedo heshiiska masuuliyiinta DKMGS ee Kambala oo ka socda Galgaduud
June 10, 2011 - By: mibrahim
Banaanbaxyo looga soo horjeeda heshiiska ay magaalada Kambala ee caasimada Uganda ku gaarayn madaxwaynaha DKMG Somaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ka soconayo degmooyin katirsan gobolka Galgaduud kaasi oo ay ka qaybgalayaan masuuliyiin iyo dadwayne farabadan.
Banaanbaxa ayaa ka socda degmooyinka Caabudwaaq,Dhuusomareeb iyo Balanbale oo ay ka taliyaan ururka Ahlu-Sunah Waljamaaca,waxaaana banaanbaxayaasha ay ku dhawaaqayaan ereyo looga soo hoorjeedo iscasilaada ra’isal wasaaraha DKMG Somaliya iyo heshiiskii madaxwayne Sheekh Shariif iyo afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Wariye katirsan Horseed Media oo ku sugan degmada Caabudwaaq ayaa sheegaya in banaanbaxan uu yahay kii ugu balaarnaa ee ka dhaca gobolkaasi,waxaana uu intaasi ku daray in banaanbaxayaasha ku sugan degmada Caabudwaaq la filayo inay la hadlaan masuuliyiin katirsan Ahlu-Sunah Wajmaaca.
Waa maalintii labaad oo banaanbax looga soo horjeedo heshiiska madaxwaynaha DKMGS iyo gudoomiyaha baarlamaanka uu ka dhaco gobolka Galgaduud,tan iyo markii magaalada Kambala ay heshiis ku gaareen madaxwayanah iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaliya.
Arimahan ayaa ku soo beegmaya xilli Ra’isal wasaare Farmaajo uusan si rasmi ah ugu dhawaaqin go’aanka uu ka qaadanayo heshiiska ay gaareen labada Shariif ee dowladda ugu saraysa.
Wixii war ah ee ku soo kordha arimahan kala soco Horseed Media